Wasiirka Warfaafinta Puntland oo sagoontiyey Saxaafadda – Radio Daljir
Janaayo 12, 2014 4:49 b 0
Garoowe, Jan 12, 2014, Wasiirka Wasaarada Warfaafinta, Isgaarsiinta , Hidaha & Dhaqanka ee Puntland Md Axmed Sh Jaamac oo kulan magaalada Garoowe kula yeeshay Warfidiyeenada ayaa sagoontiyey Suxufiyiinta Puntland oo ay soo wada shaqeeyeen intii uu xilka hayey.
Wuxuu sheegay inuu Xafiiska u banaynayo Xukuumada cusub ee uusoo dhisi doono Madaxweynaha Cusub ee Puntland Md Cabdiwali Maxamed Cali Gaas.
Isagoo ka hadlayey waxyaabihii u qabsoomay mudadii uu joogey Wasaarada Warfaafinta ayuu sheegay inuu kasoo shaqeeyey meel mainta sharciga Saxaafada Puntland oo ay ansixiyeen Golaha Wasiiradda ee Puntland.
Khilaaf ka dhextaagnaa Wasaaradda & Saxafadda ayuu sheegay inuu ku guulaystey xalintiisa.
Ugu danbayn Axmed Sh Jaamac ayaa bahda Saxaafada Puntland ugu baaqay inay la shaqeeyaan cid walba oo timaada Wasaaradda marka lasoo magacaabo Wasiirada Xukuumada Dr Cabdiwali Gaas.
Wasaarada Warfaafinta Puntland aya lagu tilmaamaa mid aan hana qaad ahayn marka loo eego sida ay u shaqeeyaan Wasaaradaha kale ee Puntland.
Xoolo ka yimid Buuhoodle oo lagu wareejiyey dadkii roobabku waxyeeleeyeen (Sawiro + Dhegaysi)